Fomba fanompoana serivisy fanoratana lahatsoratra mety ho mahasoa amin'ny fiainanao amin'ny oniversite
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Fomba fanompoana serivisy fanoratana lahatsoratra mety ho mahasoa amin'ny fiainanao amin'ny oniversite
Na dia heverina ho zava-dehibe indrindra aza ny naoty amin'ny alàlan'ny fiainam-pianarany, misy zavatra hafa heverin'ny mpanabe fa manakiana: fanoratana lahatsoratra. Io no fomba tokana hahafantaran'ny mpanabe mpianatra amin'ny alàlan'ny feony amin'ny fanoratana sy hampivelarany ny fahaizany mitsikera sy ny fahaiza-mamorona amin'ny fomba tsy mety lohahevitra na taranja hafa.
Ny fanoratana lahatsoratra dia afaka manenjana ny fisainan'ny mpianatra sy ny fahaizany mandamina, izay ho sarobidy ho an'ny mpianatra na dia mandritra ny fihazana asa aza.
Noho io antony io, ny fanoratana lahatsoratra dia singa iray lehibe amin'ny asa akademika ary, amin'ny lafiny sasany, dia hamorona ny ankamaroan'ny asa ampanaovina izay ataon'ny mpianatra. Miaraka amina tetikasa amina taonina maro hatao, fanadinana hianarana, ary na hiasa aza, ny mpianatra dia manakarama matihanina mpanoratra mpanoratra lahatsoratra hanampy azy ireo amin'ny ankamaroan'ny asa hahatratra ny fe-potoana ara-potoana ary hanana fotoana hanomezana lanja ireo asa akademika hafa.
Ny statistika dia mampiseho fa manodidina ny 16% amin'ireo mpianatra no nifanaraka tamina mpanoratra akademika matihanina hanampiana azy ireo amin'ny sanganasany. Antony tsara no isafidianan'ny mpianatra serivisy fanoratana lahatsoratra.
1. Votoatin'ny kalitao
Ny atiny tsy dia misy kalitao dia antony iray aorinan'ny isa ambany amin'ny sanganasa. Ny fikarakarana serivisy fanoratana lahatsoratra dia fomba iray azo atokisana ny antontan-taratasy apetrakao amin'ny profesoranao. Raha averina amin'ny laoniny ny taratasinao dia azonao atao ny miditra an-tserasera ary mitady 'manoratra indray ny lahatsoratro,' ary hahazo matihanina hanatsara ny kalitaon'ny asanao ianao.
Ny mpanoratra essay dia matihanina ary nanatsara ny fahaizany manoratra sy mikaroka nandritra ny taona maro, ary azonao atao ny miantehitra amin'izy ireo hanoratra atiny hahagaga ny profesora anao.
2. Fotoana ara-potoana
Ny famoahana farany ny fampianarana ary indrindra ny sanganasa dia mety hahafaty ny naotinao. Na izany aza, mety hihazakazaka ny fiainan'ny mpianatra, ary mety tsy afaka mikaroka sy manoratra atiny kalitao ianao ary mahafeno ny fe-potoana. Indraindray koa ny andraikitra sasany dia omena amin'ny fe-potoana fohy.
Ireo mpanoratra mpanoratra lahatsoratra matihanina dia mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fandefasana andraikitra ao anatin'ny fandaharam-potoana ilaina. Azonao atao ny miantehitra amin'izy ireo hanoratra atiny misy kalitao ao anatin'ny fe-potoana fohy rehefa feno asa akademika hafa ianao.
3. Fanitarana ny fahaizanao manoratra momba ny asa soratrao
Ny serivisy fanoratana lahatsoratra dia tsy manampy anao amin'ny fe-potoana fohy. Mpianatra maro no nanatsara ny azy ireo fahaiza-manao fanoratana amin'ny fianarana avy amin'ireo matihanina ireo. Mandritra ny asanao alohan'ny handefasana mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny kalitao andrasana ny atiny dia mety hahafantatra zavatra betsaka momba ny fandaminana ianao, ny fomba fanoratra, ny atiny manintona ary ny mitazona ny matihanina rehefa manoratra.
Ny fanakaranao mpanoratra mpanoratra lahatsoratra dia mety ho fotoana iray hanatsara ny sanganasao sy ny kalitaon'ny fanoratanao.
4. Naoty nihatsara
Ireo mpanoratra lahatsoratra matihanina dia azo antoka fa tsy hanao fahadisoana mitovy amin'ny fanoratana toy ireo izay tsy dia zatra izany. Ny lesoka amin'ny fitsipi-pitenenana sasany, ny tsy fahaizanao amin'ny fikarohana ary ny zavatra hafa nosedraina tamin'ny fanoratana lahatsoratra dia mety handratra ny naotinao.
Ny fanakaramana mpanoratra mpanoratra dia mety ho fomba tsara hanatsarana ny IP-nao. Ireo atiny avo lenta sy avo lenta avy amin'ny mpanoratra matihanina dia hiantoka fa ny ampahany lehibe amin'ny fiainana akademika, ny fanoratana lahatsoratra, dia mahavariana hatrany. Izy io dia voamarina amin'ny fampisehoana akademika ankapobeny.
Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny famoahana ny sasany amin'ireo asa fanoratana lahatsoratra, dia afaka mahazo fotoana sahaza ianao handinihana ireo lohahevitra sarotra kokoa, izay mety tsara amin'ny naotinao ankapobeny.
5. Fitantanana fotoana mahomby
Mety hihazakazaka ny fiainan'ny mpianatra indraindray, ary 24 ora isan'andro dia mety tsy ho ampy hamita ny zava-drehetra. Ny mpianatra sasany mifanjevo eo anelanelan'ny asa sy ny fianarana, ny sasany kosa mandray fampianarana roa miaraka ary ny sasany kosa manana enti-mody be loatra hatao ao anatin'ny iray andro.
Na dia ilaina aza ny mahafeno ny fe-potoana rehetra, dia mety hampahory sy hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahombiazanao amin'ny ankapobeny izany. Amin'ny fiarahanao miasa amin'ny mpanoratra mpanoratra matihanina dia hanitatra ny fahaizanao mitantana asa marobe ianao ary mbola manam-potoana haka aina sy hamerenana indray.
6. Fanohanana 24/7
Raha sendra manana fanontaniana momba ny asa nifanarahana ianao dia afaka mahazo valiny amin'ny fotoana tena izy. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpanoratra ary mamaha ny olanao amin'ny sanganasa izay efa voavaha. Raha tsy afa-po amin'ny asa natolotra ianao dia afaka mangataka famerenam-bola.
Azonao atao ihany koa ny mahazo fanohanana amin'ny sanganasa sy taratasy misy fe-potoana fohy.
Amina dolara vitsivitsy monja dia azonao atao ny manao sanganasa matihanina sy avo lenta hanatsarana ny GPA anao. Ankoatr'izay, ianao dia hampihena ny asanao akademika amin'ny vidiny mirary ary hampandeha kokoa ny fiainanao any amin'ny oniversite.
Ny lahatsoratra iray voarindra tsara nalaina tamin'ny alàlan'ny fanaovana plagiarisme sy ny mpanamarina ny fitsipi-pitenenana dia afaka manampy anao hahita fahombiazana amin'ny asanao sy ny asanao. Azonao atao ny mahazo ireo serivisy ireo amin'ny fotoana rehetra ary ampiasanao manokana mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny akademika.
Ny serivisy fanoratana lahatsoratra dia ara-dalàna ary mety ho mora ampiasaina rehefa sahirana amin'ny asanao any an-tsekoly na mila mahazo naoty tsara amin'ny dianao ianao.